Uru ndị uwe ojii na-eyi ese foto - OMG Solutions
N'ụbọchị ọ bụla na-agafe, ọnụọgụgụ ụwa a na-abawanye. Nke a na - enye mmụba dị elu na teknụzụ na sayensị. Ugbu a ụbọchị, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ọrụ ebube dị anyị nso. Ihe ndị a na-eme ka ndụ dịrị anyị mfe. Ebe ọnụ ọgụgụ ndị isi nke obodo na-abawanye ụba, a ga-enwe mmụba dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ mpụ. Ndi uwe ojii obodo gha aghata nsogbu kwa ubochi. Maka ịdịrị ha, sayensị enyerela anyị aka site n'inye anyị Ahụ Worn Cameras.
Gini mere eji eji aru eji aru eji aru ndi eji aru aru eme aru?
Ahụkasị Ahụhụ Ahụhụ bụ ihe omimi nke sayensị na teknụzụ ma ha na-eme ka ndụ anyị dịrị anyị mfe. Ka anyị leba anya n'iji igwefoto a. Kedu ihe eji eji kamera okpo? Ndị ọma, ndị uwe ojii na-eji kamera ndị a oge ọrụ ha. Ndị uwe ojii na-eji igwefoto ndị a na-edekọ ọrụ ha na-eme kwa ụbọchị. Gịnị mere ha ji eme ya. Ndụ onye uwe ojii jupụtara n'ihe egwu na nsogbu. Ọ gha ewere nwayọ nwayọ. Nke a choro inwe ikike nghọta na ikike dị nkọ. Gịnị ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu na ịnwe igwefoto eyi ahụ na-eme ka ọ hụkwuo ụzọ? Nke a bụ eziokwu. Dika igwefoto si ede ihe banyere onye uwe ojii kwa ụbọchị ọ na-eme omume dị ka anya nke atọ. Ọ nwere oge ụfọdụ ụfọdụ ihe mmadụ na-anaghị achọpụta mgbe ọ na-elele. Igwefoto na - ejide ihe ndị a. Dịka mgbakwunye, enwere ike ịkpọ ihe ndekọ ndị a ugboro ole hachọrọ maka nyocha na nyocha.
Uru nke Anụ ahụ Ndị Na-ahụ Maka Ahụ:
Ahụ Nwa Ara ahụ nyere aka nke ukwuu na ndụ onye uwe ojii kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị hụrụ nke ọma, anyị ga-ahụ ọtụtụ cons na ngwaahịa a mana n'ozuzu, igwefoto ikpuru anụ ahụ bụ nnukwu enyemaka. Ngwa ọ bụla nwere ụfọdụ uru yana ọghọm mana anyị ga-ewere ya na ngwa a nwere ọtụtụ uru dị ka ya na ọnụọgụ ọghọm ya.
Ka anyị leba anya na ụfọdụ uru nke Ahụ Ahụ Worn Cameras:
Igwefoto ndị uwe ojii na-eme ka nchekwa nke ọha na eze dịkwuo elu site na ịnye ha nghọta dị nkọ n'ụdị igwefoto. Ndị mmadụ na-eme ihe dị iche ma ha mata na a na-ese ha. Ndị uwe ojii uwe ojii nwere ike ịgba ndị mmadụ ezigbo ume ka ha kpaa àgwà ọma, ma hazie ndị mmadụ, mee ka ibelata ime ihe ike, iji ike mee ihe, na ịwakpo ndị ọrụ ọrụ. Dika ihe omumu, a choputara na ihe ruru 40% belata onu ogugu ojiji nke ndi uwe ojii puru iche mgbe ese ndi ahu aru; mkpesa megide ndị ọrụ dara site na 30 na afọ tupu ọmụmụ ihe ahụ gaa 3 n'ime afọ ikpe. Inwe kamera n’ahu na egosiputa kwa ihe ndi uwe ojii mekwara. N’ihi ya, ọ dị mkpa ka ndị uwe ojii mee omume na ịrụ ọrụ ha n’ụzọ ziri ezi. Dịka ha maara na igwefoto na-edekọ ha ma ọ bụrụ na ha na-ekwu okwu ọjọọ, ha ga-aza ajụjụ maka nke ahụ.
Nke a na-otu maka ọha na eze. Ha ga-eme omume ma kwanyere ndị uwe ojii ha ugwu ma ọ bụrụ na ha ma na-edekọ ha ma nọrọ n'ihu igwefoto.
Wepụ Ebubo segha:
Igwefoto ndị uwe ojii na-eme ka ndị uwe ojii na-aza ajụjụ ma na-echebe ndị ọrụ site na ebubo ụgha nke omume ọjọọ. Igwefoto ahụ ndị uwe ojii na-enye ihe akaebe anya na ọdịyo nwere ike jiri aka ha chọpụta ihe mere n'ọnọdụ ọnọdụ ọ bụla. Ka anyị mee ihe atụ dịka na Texas, onye uwe ojii chụrụ n'ọrụ ma tụọ ya igbu ọchụ mgbe eserese igwefoto eyi ahụ nwere ihe megidere nkwupụta mbụ ya na egbe nke onye ntorobịa enweghị ngwa agha. Nke a gosipụtara anyị mkpa ọ dị igwefoto eyi. Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe atụ na ndapụta na ndụ onye uwe ojii na-emetụta ndụ kwa ụbọchị. Ya mere, ihe kachasị mma ha nwere bụ igwefoto eyi ahụ. Ihe dị otu ahụ mere na Texas na 2015 ebe a mara onye uwe ojii ebubo na-ezighi ezi ọ bụla ikpe ọnwụ nke kwụsịrị mgbe eserese sitere na igwefoto eyi ahụ.
Ngwá ọrụ mmụta dị mma:
Igwefoto ahụ ndị uwe ojii bụ ezigbo ngwaọrụ maka mmụta ma nwee nkwado siri ike n'aka ndị otu. Enwere ike iji vidiyo e dere site na igwefoto ahụ uwe ojii wee zụọ ndị ọrụ ọhụụ na ndị dị ugbu a banyere otu esi eme n'oge nzute ndị siri ike na ọha na eze. Ngalaba ndị uwe ojii Miami na-eji igwefoto ahụ maka ọzụzụ kemgbe 2012. Ọ na - enye ndị ọrụ ọhụrụ ohere zuru oke iji mụta ihe. Ha nwere ike ịhụ ndị okenye ha na-anagide ọnọdụ ahụ ma mee ka ọ kwụsie ike. Nke a na-enye ha ohere ịmụ na ọganihu. Ọ bụrụ na ndị ọrụ ọhụụ hụrụ ihe ndekọ nke ndị zutere, mgbe ahụ enwere ike ịkwadebe ha n'uche. Nke a na-enyekwa ha uru n’oge a na-akụ ihe dịka ọmụmaatụ ndị okenye tozuru oke nwere ike ịrụ igwe ma ọ bụ kamera ahụ na-etinye n'ahụ ha. Ndi rookies nwere ike imuta n'aka ha site na ilere vidiyo ha edere nke ga-enye ha ezigbo ohere imuta.
Na mmechi, anyị nwere ike ịsị na igwefoto ahụ yi ya bụ nnukwu ihe ị nwere ike iji rụọ ọrụ bara uru. Enwekwara ọtụtụ ọghọm dị na iji ngwa a mana ọ bụrụ na anyị hụ nke ọma, anyị ga-achọpụta na o nwere ọtụtụ uru na ọghọm ọghọm ya. Ya mere, n'echiche nke anyị, igwefoto eyi ahụ bụ ihe atụ nke ngwa bara uru.
Nzuzo 5817 1 Echiche Taa